Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Saaka: Kane, Lampard, Pochettino, Alli, Kean, Dybala
[ January 21, 2022 ] Saadaasha Paul Merson ee Kulamada Premier League 23aad Natiijada Kulanka Manchester United Vs West Ham United, Chelsea Vs Spurs	Wararka Ciyaaraha
[ January 21, 2022 ] Cristiano Ronaldo oo shaki ku jiro kulanka Manchester United vs West Ham United	Wararka Ciyaaraha
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Kane, Lampard, Pochettino, Alli, Kean, Dybala
January 4, 2021 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Ku soo dhawaada Wargeysyada Yurub iyo Wararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee Saaka waxyaabaha ay Qoreen Waxaa soo diyaariyay Bahda Ciyaaro.com
La Soco Malin walbo inta u dhaxeysa 10:00 am ilaa 12:00 pm oo ah labo saacadood gudahood
Tottenham ayaa bilowday wadahadalo hordhac ah oo ay la yeelaneyso weeraryahan Harry Kane oo ku saabsan qandaraaska loo kordhinayo. 27 jirkaan kabtanka u ah England ayaa saxiixay heshiis lix sano ah 2018 laakiin gudoomiye Daniel Levy ayaa doonaya inuu ka weeciyo xiisaha kooxaha Manchester City iyo Paris St-Germain. (Independent )
Shaqada Frank Lampard ee tababaraha Chelsea ayaa ku jirta khatar weyn waxana ay kooxdu bilowday in ay baarto qorshooyin kale. (TheAthletic)
Paris St-Germain ayaa wadahadalo kula jirta kooxda Everton si ay 20 jir weerarka uga ciyaara Italy Moise Kean uga dhigto heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah oo ay ku hesho 31 milyan euro. (Sky Sports)
Tababaraha cusub ee Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa loo ogolaan doonaa inuu ruxo kooxdiisa – waxaana ay taasi la micno noqon kartaa inuu u dhaqaaqo 24 jirka khadka dhexe ee reer England iyo kooxda Tottenham Dele Alli. (Mirror)
Weeraryahanka reer Argentina ee Paulo Dybala, oo 27 jir ah, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Tottenham iyo Manchester United, ayaa waxaa iibin doonta Juventus xagaagan haddii uusan saxiixin qandaraas kordhin. (Football-italia.net)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa wadahadalo la yeelan doona ciyaartoy dhowr ah oo ka mid ah kooxaha qadka dhexe ka ciyaara qorshihiisa suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, lix ka mid ah ayaa amaah ama heshiis joogto ah ku bixi kara (thesun)
Manchester United ayaa diidi doonta isku dayga Atalanta ee ah inay garabka reer Ivory Coast Amad Diallo, oo 18 jir ah, sii heysato kooxda ka ciyaarta Serie A ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (ESPN)
Maamulaha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa ugu baaqay kooxda inay la soo wareegto weeraryahan cusub suuqa janaayo.(goal)
Tababare Mikel Arteta ayaa sheegay in Arsenal ay ka wada hadli doonaan mustaqbalka 29 jirka weerarka ka ciyaara ee reer France Alexandre Lacazette xagaaga. (Goal)
Daafaca reer France Lucas Digne, oo 27 jir ah, ayaa ku sii dhawaanaya inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda Everton. (Liverpool Echo)
Arsenal ayaa diyaar u ah inay dib ugu yeerto qadka dhexe reer Uruguay Lucas Torreira amaahdii uu ku joogay Atletico Madrid, halka Fiorentina ay dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay 24 jirkaan. (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain Joan Jordan, oo 26 jir ah, ayaa sheegay inuu aad ugu raaxeysan karo Sevilla, xilli lala xiriirinayo Arsenal. (Football.London)
Arsenal, Leeds iyo Crystal Palace ayaa ku raad jooga 26 jirka QPR ee reer Switzerland Seny Dieng. (Thsun)
Tababare Jurgen Klopp ma oga in Liverpool ay dhameystiri karto wax heshiis ah bisha Janaayo. (Liverpool Echo)
Daafaca kooxda Manchester United iyo xulka Portugal ee 21 jirada Diogo Dalot ayaa ku raaxeysanaya nolosha amaahda AC Milan, laakiin wuxuu sheegay u dhaqaaqista San Siro inay aheyd dareen “qadhaadh”. (Express)
Ivory Coast, Tunisia iyo Xulalka kale ee Xalay u soo Baxay Wareega 16-ka ee Koobka Qaramada Afrika
Arsenal 0-2 Liverpool Jota oo Reds ka Caawiyay finalka Koobka EFL Cupka